Vaovao - ASGA 2017 ao Vietnam
Ny ASGA Show At Vietnam dia fahombiazana lehibe ihany koa tamin'ity taona ity. Ny milina fanodinam-pandehanay dia nankafy ny lazany indrindra toa ny nantenainay. Raha ny fanjifan'izy ireo dia apetrakay miaraka amin'ny vidiny mirary ny masinina ara-toekarena hamaliana ny fangatahan'izy ireo. Ary eritrereto hoe, tamin'ny andro voalohany tamin'ny fampisehoana, dia nanao ny varotra teny an-toerana tamin'ny iray tamin'ny varotra anay izahay, mahatalanjona satria tsy maintsy miverina any amin'ny masinina any Shina isika aorian'ny fampisehoana varotra izay miteraka fahatokisan-tena amin'ny varotra anay koa! Hotazoninay amin'ny fampisehoana manaraka ianao raha mikasa ny hanatrika indray.
Sehatra tsara foana ny fampisehoana varotra hampisehoana ny tanjakao, fa ho anay tsy izany ihany no fandaharam-potoana. Aorian'ny fampisehoana varotra dia manao fandaharam-potoana hitsidihana mpanjifa marobe amin'ny faritra misy azy izahay. Ny fifandraisana amin'ireo mpanjifanay eo an-toerana dia akaiky kokoa rehefa avy nihaona tamin'izy ireo sy nitsidika ny toerana misy azy ireo izy ireo. Mianatra misimisy kokoa momba ny hevitr'izy ireo sy ny paikadin'ny tsena dia manao varotra fanitsiana kely any Vietnam izahay. Mino mafy izahay fa ny tsena amin'ny fitomboana any Vietnam haingana satria mafana ny indostrian'ny lamba any Vietnam. Io no sehatra tsara indrindra raha misy resaka tsara eo amintsika sy ny mpanjifa tsy tapaka.
Ho anay dia fihaonana amin'ny olona vaovao sy fiaraha-miasa amin'ny olona mahaliana izany mba tsy hanome ny mpanjifanay afa-tsy ny tsara indrindra. Misaotra ny rehetra izahay indrindra ny ekipan'ny Asiaprint anay, izay nandray anjara tamin'ity fandaharana ity hoe Smashing Hit. Raha tsy misy azy ireo dia tsy afaka manao fampisehoana mahomby sy mahafinaritra isika. Saingy tianay ny hampita ny fisaorana manokana ho an'ireo mpanjifany sarobidy sy manohana, raha tsy nisy azy ireo izahay. Ny fahatokisanao sy ny fanohanananao dia mampihena anay isaky ny ary manantena izahay fa afaka manohana anao indray amin'ny fanampiana ny orinasanao hitombo.
Izahay dia matihanina amin'ny famokarana fitaovana famindrana hafanana "Asiaprint" sy ny milina fanontana. Ny orinasanay dia mifantoka amin'ny fampidirana ny teknolojia famokarana mandroso sy ny fampiharana ny fifehezana kalitao henjana. Ny fitaovanay, izay feno, tsara tarehy ary misy vidiny mirary, dia amidy eraky ny firenena ary nankafizin'ny mpampiasa maro. Fitaovana famindrana hafanana: milina fanodinana hafanana an-tanana, milina fanontam-pirinty lohan-doha, milina famindrana hafanana pneumatic, milina fanodinana hafanana hydraulic, ary milina famindrana hafanana mihodina; fanontam-pirinty: mpanamory fantsom-pivezivezy, milina fanodinana vovoka, milina fanontam-pirinty ary milina fanamafisam-peo mety amin'ny fampiasana fanontana, ozinina akanjo ary indostria hafa. Mampanantena anao i Jiangchuan fa ny fahafaham-ponao no ho tadiavinay, ary hanome anao serivisy tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny haitao matihanina sy ny fitaovana voalohany. Asiaprint dia manantena ny hanana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra ary amin-kitsimpo amin'ireo sakaiza avy amin'ny faribolana rehetra.